Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Ny tantaram-pahaizan'ny Thomas Lemar momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny kintan'ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Mr Versatile'. Ny tantaram-pianakavian'i Thomas Lemar momba ny tantaram-pitiavan'antoko sy ny zava-misy mbola tsy voatanisa momba ny tantaram-piainan'ny biografia dia mitondra fitantarana feno momba ireo hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Ankehitriny, i Thomas Lemar dia iray amin'ireo trano mafana indrindra ao amin'ny varavarankely famindrana 2017. Ankehitriny, aleo manomboka.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa: Voalohandohan'ny fiainana
Thomas Lemar Teraka tamin'ny novambra 12th of 1995 tao amin'ny nosy Carribean Baie-Mahault, Guadeloupe, izay faritanin'i Frantsa. Ny Guadeloupe dia nosy mahatalanjona noho ny fitondrana talenta baolina mainty ho any Frantsa. Anarana manan-danja toy ny Thierry Henry ary Alexandre Lacazette Samy manana ny lovany avy amin'ny nosy avokoa izy ireo. Nifindra tany Frantsa ny ray aman-drenin'izy ireo nandao ny nosy Lufthansa Frantsa frantsay.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:Relationship Life
Tamin'ny fotoana nanoratana, i Thomas Lemar dia nanambara ny fifandraisany amin'ny maha-tokana azy. Midika izany fa tsy misy fifandraisana azo antoka na sipa-namanao na ny vadinao taloha. Tsy manana ankizy koa izy.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:Style of Play
Lemar dia mpilalao baolina matihanina samihafa afaka milalao amin'ny elatra roa sy amin'ny foibe ary amin'ny anjara asa malalaka. Izy no ambony indrindra amin'ny tongony, saingy manana fahaizana manokana amin'ny tongony havanana. Voamarika izy noho ireo fahaiza-manaony mampiavaka azy, ny fahaiza-mandanjalanja matanjaka ary ny fialan-tsasatra maimaim-poana. Nolazainy fa aleony mifandray amin'ny mpifanandrina aminy, fa tsy mandray anjara amin'ny mpiaro: "Miezaka ny manalavitra ireo delege aho ary mifantoka amin'ny fandehanana sy ny hetsika araka izay tratra."Matetika izy no hanandrana handinika lavitra sy hahatratra ny tanjona 14 amin'ny fisehoan'ny 55 ao amin'ny fizaran-taona 2016-17 ary nanampy ny 17.
Izy dia milalao miaraka amin'ny lohany ary ny tongony ankavia dia afaka mamorona sariaka - tsy mihevitra velively amin'ny zava-manahirana azy izy ary na dia afaka mamely ny mpilalao amin'ny alahelo aza izy, dia manana lozam-pifamoivoizana be dia be izay ampiasainy amin'ny fanoheran'ny mpanohitra.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:Karohy amin'ny famintinana
Ny vokatra avy amin'ny rafi-tanin'ny tanora Caen, Lemar dia nanao ny laharam-pahamehana voalohany tao amin'ny lalao fanokafana ny vanim-potoana 2013 / 14 tamin'ny volana Aogositra 2013.
Nanohy ny fanaovana fampisehoana 31 ho an'ny SMC izy, talohan'ny nisintonany tombontsoa avy any Eorôpa - izy dia nandefa tsaho momba an'i Chelsea ary nifandraisany tamin'i Liverpool, Lyon ary Bordeaux ihany koa, saingy nisafidy hetsika tany Monaco izy ho an'ny £ 3.4 tapitrisa ao amin'ny 2015.
Naneho an'i Frantsa amin'ny ambaratonga rehetra avy any U17 ho U21 izy ary nanao ny laharam-boninahitra iraisam-pirenena voalohany amin'ny 2016 Côte d'Ivoire.
Hatramin'ny nandehanana niala tao Caen, ny antoko 21-taona dia nitety toerana maro tao amin'ny faritra afovoany.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:Ligne 1 Trophy
Angamba, Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko ary Bernardo Silva dia mety ho betsaka ny fiderana nataon'ny mpijery. Saingy ny anjara andraik'i Lemar ao Monaco nandresy Ligue 1 ary ny fahatongavana ny semi-finale amin'ny Ligin'ny Champions dia tsy azo zakaina.
Nitarika ny kliobany izy handresy ny ligy Frantsay tamin'ny herintaona (2017 / 2017) ary nahatratra ny lalao famaranana ny Champions League, nandondòna ny fitiavan'i Manchester City sy Borussia Dortmund teny an-dalana.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:1 Fahalemena, hery mahery
Na dia milalao ny elatra aza izy dia tsy sahy mitombo toy ny ekipa Benjamina Benjamin Mendy sy Mbappé, saingy tsy mila izany izy. Lemar dia manohana ny fifandraisana ary milalao andalana iray sy roa ary mampiasa hetsika sy ny fandrahonana ny fitaterana azy mba hanokafana ny toerana.
Tsy nisy olona Monaco tonga nilalao mihoatra ny lalao tao amin'ny 2016 / 2017 (2.2) noho ny Lemar, ary nanao lakroa maromaro kokoa (1.4) noho ny iray tamin'ireo mpiray tarika taminy. Ary avy amin'ireo izay nilalao tsy tapaka tao amin'ny Ligue 1, dia ny safidy voafidy Radamel Falcao (2.8), Valere Germain (1.8) sy Mbappe (1.8) dia nitifitra imasom-bolo ho an'ny lalao mihoatra noho i Lemar 1.7.
Tadidio fa ity 21 taona ity dia nanampy nanely an'i Tottenham tao amin'ny Ligy Championship tamin'ity fitokonana ity.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:Ny Rainy, tovovavy manafintohina amin'ny alàlan'ny aseraha
Araka ny GFFN, Tian'ny rain'i Lemar izy hijanona ao Monaco ary hanasonia sonia fifanarahana amin'ny fifaninanana mba hahafahan'ny 21-taona hanan-karena indrindra ho an'ny ekipa nasionalin'i Frantsa amin'ny World Cup ao 2018.
Ny tsaho dia nivezivezy tamin'ny alàlan'ny varavarankely fampandehanana 2017. Nanoro hevitra izy fa tian'i Edwige ny 'handà' ny zanany lahy. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, naverina naverina tany Monaco i Arsenal tamin'ny baikon'ny £ 40m ho an'ny mpihazakazaka taorian'ny soso-kevitra hafa an'ny £ 31m ary avy eo dia toa tapitra ny £ 35m. Na izany aza, lazaina fa vonona ny hiakatra £ 50m izy ireo.
Ny fanontaniana dia; Moa ve ny Arsene Wenger hanasitrana £ 50m - mihoatra noho ny Mesut Ozil - ho an'ny mpilalao iray izay nikasa ny hitazona ny banky amin'ny ankamaroan'ny fotoana?
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:Nahoana no nifidy an'i Salah i Liverpool ho solon'i Lemar
Eny, tena tiany izy ireo Salah, saingy voamarik'izy ireo fa ny ankamaroan'ny asa tsara ataony dia ny fanafihana entin-tanana raha toa ka manana toerana izy, noho ny hivoahany. Tsy manana fomba azo itokisana toa an'i Lemar izy. Heveriny fa ny lemar dia ho ilaina kokoa amin'ny famongorana fiara fitaterana.
Ny antony voalohany tsy nandehanany dia noho izy lafo be. Nihevitra izy ireo fa tsy hivarotra azy amin'ny vidiny mora i Monaco. Tsy maintsy nampionona ny tenany izy ireo tamin'ny famaranana an'i Lemar dia mety kokoa amin'ny baolina noho ny tsy fisian'izany. Mino izy ireo fa ampy ny an'i Lallana, Coutinho, Gini ary Firmino izay mahafinaritra amin'ny baolina.
Ny nilainy dia mpilalao iray hafa izay afaka nandositra ny baolina sy ny ambiny. Salah dia io lehilahy io. Lemar, izy ireo dia tsara kokoa AM noho izy LW.
Ny tantaram-pahaizan'i Thomas Lemar momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa:Zavatra hafa tokony hahafantarana
Ny modely nomen'i Lemar dia i Andres Iniesta foana, ary asehony izany. Na dia mahavariana aza ny fahaiza-manaony manjavozavo, dia tsy voatery hisafidy amin'ny mpiaro azy izy, fa ny fanamafisana ny ekipa ekipa.
Diego Godin ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny tantaran'ny tantaram-pitiavan'i Jan Oblak momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa